Mitondra fifantenana - Zhejiang Estar Mechanical Co., Ltd
mijoro ho safidy
Enina lafin-javatra mifandraika amin'ny nitondra ny fiainana;
Ny lehibe kokoa ny entana, ny fanompoana fohy kokoa ny fiainan'ny-jaza; ny lehibe kokoa ny entana fluctuation, ny lehibe kokoa ny fiantraikany eo amin'ny fiainana mitondra, ny fohy kokoa ny mitondra fiainana; Na ahoana na ahoana, ny entana ambony indrindra dia tsy afaka mihoatra ny teorika allowable entana ambony indrindra. Entana dia mitovy habe amin'ny tena asa entana mizarazara ny faritra kasaina ny jaza, ny raikipohy dia P = F / (D * B).
(2) Speed ​​V [m / s] sy ny PV sarobidy
Mitondra ny fiainana dia miankina amin'ny PV hasarobidin'ny ny habeny, izany hoe, ny tena entana P [N / mm2] ary ny sliding velocity V [m / s] entana, PV sarobidy dia kely kokoa, ny ela ny mitondra ny fiainana.
(3) Temperature T [òc]
Mitondra ny fiainana ihany koa miankina amin'ny ny mari-pana ny jaza, raha ampiasaina, izany amin'ny endrika fifidianana dia tokony handinika ny singa mifanaraka amin'ny toetra hihena.
(4) ho etỳ ambonin'ny fahombiazana ny faritra anaovan'ireo
Fahombiazana ny fifandraisana eny ambonin'ny ny akony eo amin'ny faritra mitoto vary dia tokony ho eo Ra0.2 ~ Ra0.8, nitondra ny fiangonana sy ny fampiasana ny dingana tsy afaka ny hanana haino aman-jery maranitra fahasimban'ny ny mitondra ambonin'ny.
(5) ho etỳ ambonin'ny-mitoto vary fitaovana ny faritra, ho etỳ ambonin'ny fahombiazana ny fikitroha faritra dia toe-javatra mahakasika ny fanompoana fiainan'ny bushings, eo ambanin'ny toe-javatra ara-dalàna ny surface takiana ≤ 0.4μm ka.
(6) anton-javatra hafa toy ny mitondra seza famolavolana, lubrication toe-piainana.